shabaqa Wire la furitaanka hexagonal bixisaa hawo iyo dayrka isticmaalka wanaagsan. shabaqa silig Hexagonal laga sameeyey oo maroojin carbon silig steel, electro ama kulul lagu rusheeyey galvanized, ka dibna dahaarka leh caag ah, ama bannaanka ah. Waxaa lagu been abuurto karaa sanduuqyada gabions - mid ka mid ah waxyaabaha silig ugu caan ah oo ay gacanta ku daadka. Markaas dhagaxyo yihiin rido. Dul saarin of gabions dhigi derbi ama bangiga ka dhanka ah biyo iyo daadka. shabaqa silig Hexagonal waxaa sidoo kale welded galay shabaqa digaagga for afgembi of digaag iyo hilib digaag kale ....
Supply Kartida: 3000 Roll / Rolls per Month
Shabaqa Wire la hexagonal furitaanka bixisaa hawo iyo dayrka isticmaalka wanaagsan. Shabaqa silig Hexagonal laga sameeyey oo maroojin carbon silig steel, electro ama kulul lagu rusheeyey galvanized, ka dibna dahaarka leh caag ah, ama bannaanka ah.
Waxaa lagu been abuurto karaa sanduuqyada gabions - mid ka mid ah waxyaabaha silig ugu caan ah oo ay gacanta ku daadka. Markaas dhagaxyo yihiin rido. Dul saarin of gabions dhigi derbi ama bangiga ka dhanka ah biyo iyo daadka. shabaqa silig Hexagonal waxaa sidoo kale welded galay shabaqa digaagga for afgembi of digaag iyo hilib digaag kale. Dadku isticmaalo sida dayrarka ka dib markii cagaaran dahaarka leh, iyo kharashka waa la dhimi karaa. Sanadihii la soo dhaafay, shabaqa ku silig hexagonal ee xarigga galvanized bir ah ayaa loo isticmaali jiray in dayrarka, afgembi iyo xoojinta dhismaha.
Sida laga soo xigtay codsiga , waxaan siin shabaqa silig ee noocyada soo socda:
General Ujeeddo Wire dhaliyay,
Culus oo Nooca Wire dhaliyay,
Isagoo dhaliyay Wire for Deedadka.
Furitaanka Hexagonal shabaqa silig leh tolmo wanaagsan waxaa inta badan loo isticmaalaa sida dayrka fudud in digaagga, beeraha, waayo, shimbiraha, bakaylaha iyo xayawaanka iaydoo, ilaalada geed iyo dayrka beerta, biinka kaydinta iyo taageerooyinka madaxtooyada maxkamadaha tennis. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida dhar mesh silig, waayo, xoojinta iftiin ee ku xidhnaa galaas caddayn iyo cement la taaban karo, plastering oo yeynan waddooyinka, iwm
qiimeyntu Noocyada la heli karo waxaa ka mid ah:
• maroojin si toos ah shabaqa silig hexagonal
• beddeli maroojin shabaqa silig hexagonal
• double-jihada qaloocdo hexagonal shabaqa silig
Dhamaado of Hexagonal Wire dhaliyay noqon kartaa:
• galvanized ka dib markii jare, galvanized hor jare,
• PVC dahaarka galvanized
• kulul-rusheeyey galvanized
General faahfaahinta of Hexagonal Wire dhaliyay
Next: Chain bowd Link
PCV dahaarka Hexagonal Wire mesh
Staninless Steel mandiil dushooda iyo Wire
Panel Staninless Steel welded mesh